Omenala Igbo -- Mmemme Iri Ji Ọhụụ | Igbo Radio
Kaosiladị, Igbo sị na-abụ e gburìsie anụ enyi, o kwere obubu, maka na ọ bụrụ na ọkpụ aja akọwaghị ihe ọ kpụrụ, òfèkè nwere ike ịkpọ nwansu amụ dike. Ọ bụ nke mere o jiri dị mkpa ịkọwa ihe 'Iri Ji Ọhụụ' bụ n'ala Igbo, ọkachasị dịka otu n'ime omenala e jiri mara ha.
N'ịgbasò nke ahụ, iri ji ọhụụ bụ otu n'ime omenala dị iche iche e ji mara ndị Igbo n'ụwa gbaa gburugburu. Ọ bụ mmemme omenahọ ma bụrụkwa nke ezi nwaafọ Igbo ọbụla na-esonyesi ike na ya.
Mmemme iri ji ọhụụ bụ oge e ji enye Chineke ekele n'ihi onyinye ji, ya na nchebe ya na ndụ o nyere anyị wee ruo n'oge owuwe ihe ubi; maka na ọ na-abụ a kọọ, gwute, a sị na ahọ amagbuo onwe ya. Ọ bụkwa oge a ka ndị Igbo ji akwanyere ji ugwu ruuru ya dịka eze nke ihe niile a kọrọ n'ubi, dịka akụkọ okike siri kọọ, bụkwa nke mere ka a mara na ọ bụ agbara bụ mmụọ nwe ji. Ọzọ bụ na mmemme iri ji ọhụụ bụ oge ndị Igbo ji ezu ike ma na-elekwa onwe ha ọrụ maka ọrụ ugbo ahọ ahụ.
N'obodo ala Igbo niile, ịkọ ọrụ ugbo bụ ihe ọtụtụ mmadụ jiri mere aka ọrụ; ọ bụghị naanị n'ihi nri ma ọ bụ ego si na ya apụta, kama n'ihi na ọ bụ ihe e jiri mara ndị Igbo, maka na ọ bụrụ na ịkpọ ngwèrè emeghị ihe o jiri bụrụ ịkpọ ngwèrè, ụmụaka ewere ya mee anụ ọkọchị na udummiri.
Mgbe Ndị Igbo kụnyesikwara mkpụrụ ọkụkụ dị iche iche dịka ji, ede, akpụ, ọka, ọnà, ụgụ, ọkwụrụ, ụgbọgụrụ na ihe ndị ọzọ n'ubi; ha na-atụ anya na ha ga-enweta nke karịrị nke ahụ n'ahọ ọzọ, maka na ala bụ ọnara ọzụọ. Oge nke ahụ ruzịrị, ihe ndị ahụ a kọrọ n'ubi tochaa, ndị Igbo n'obodo ha dị iche iche na-akpọ oriri n'isi ótù n'ime ha, nke bụ eze ha, tupu onye ọbụla n'obodo ahụ amalite ribe ya.
N'ụfọdụ obodo, dịka Enugwu-Ukwu nke dị n'okpuru ọchịchị Njikọka na steeti Anambra, ha na-ebu ụzọ mechaa otu omenala pụrụ iche a kpọrọ mmemme 'Ịkpọ Ji', bụ nke ha ga-emerịrị tupu a malite ibubata ma ọ bụ ire ji ọhụụ n'ahịa obodo ahụ bụ nkwọ Enugwu-Ukwu. Ha mechazie nke ahụ, ha ewee mezie mmemme iri ji ọhụụ kpọmkwem.
Ndị obodo ndị ọzọ nwegasịrị ihe dị iche iche ha na-akpọ ya n'obodo ha, bụ nke dabarà n'usoro ya bụ mmemme. Iji ma atụ, a bịa na steeti Anambra, e nwere ndị na-akpọ ya Ìhèjiọkụ, Imo Ọka (Awka), Afịọlụ (Nnewi), Afịọlụ (Nnobi), Ịwa ji, Njọkụ, Ịgba Ọfala, Ilo Mmụọ (Ogidi), tinyere ndị ọzọ.
Tupuu ụbọchị a ga-eri ji ọhụụ kpọmkwem, a na-aga n'ọba, tọsịa ma wepùsie ji ochie niile dị n'ọba ji, iji wee nabata ji ọhụ na iji kwanyere ya ùgwù dịka onye ọhụụ ọ bụ, maka na oke ji na abàlà anaghị azọ ihu ọba.
A na-agba ụdị egwu ọdịnala dị iche iche, dịka uhie (nke ọ bụ ndi ichie maọbụ ndị chiri echich na-agba), egwu mmọnwụ, ekpo, ọgbamgbada, egwù agụ, ọpịakamkpàrá, tinyere ihe ndị ọzọ dị iche iche na-ekpozịkwa elu ụbọchị ahụ, iji mee ndị mmadụ obi ụtọ, ọkachasị site n'ịchụ ha ọsọ, ịgba egwu, ime anwansì, na ihe ndị ọzọ.
Ụfọdụ na-agbakwazị mgba ka ha mebe nke ha, bụ oge ụmụokorobịa ji esì ọkụkpụ, ka a mara onye ka eriju afọ ma ọ bụ onye ákwà kàrà si ike n'ukwu, maka na ọ na-abụ dike zùte dike ibe ya n'ụzọ, a mara akanwụ na ụtaba, nke na-akpọlite uzere.
Oge ụfọdụ, onye kacha bụrụ okenye n'obodo na-anọ na mmemme iri ji ọhụụ wee kọọrọ ndị obodo ahụ ọtụtụ akụkọ miri emi dịgasị añaa gbasara obodo ahụ, dịka akụkọ ntọala ma ọ bụ akụkọ okike (history) nke obodo ahụ, ebe ha siri bịa, nakwa ọtụtụ akụkọ ọdịnala ndị ọzọ miri èmì.
Nke kacha nke bụ na mmemme iri ji ọhụụ na-abụkwazị oge oriri na ọñụñụ pụrụ iche maka na erimeri na-abụ atụrụ taba ụbọchị ahụ; onye ọbụla na-añụkwa ọgwụ afọ ma ghebe afọ ya oghe tupuu o si n'ụlọ ya pụtaba.
Nkwụ, nke gụnyere mmanya ngwọ, nkwụ elu, mmanya karama, ji a hụrụ ahụ ma were ụtazị mara abụba, ose, ụkpaka, ogiri na mmanụ na-amụ mịrịmịrị chọọ ya mma socha n'oriri a na-eri ụbọchị ahụ, na ihe ndị na-eme ka mmemme ahụ zaa aha a kpọrọ ya.
Ihe ndị a niile bụ ihe na-eweta obi añụrị na obi ụtọ na ya bụ mmemme omenahọ, ka a ga-asị oge ya agwụna agwụ. Ụfọdụ obodo na-eme mmemme iri ji ọhụ n'ọnwa nke asatọ, ebe ụfọdụ na-eme nke ha n'ọnwa nke iteghete, maka na ọ bụ mgbe onye jiri teta, ọ bụrụ ụtụtụ ya.
N'ọtụtụ obodo, ụfọdụ ndị aka ji akụ na ndị selitere isi n'obodo na-emekwa mmemme ịwa ji ma ọ bụ iri ji nke ha na be ha dị iche-iche, bụkwa nke onye na-eme ya na-akpọkù ndị enyi ya, ndị nwadiala, ndị ikwu na ibe, na ndị ọzọ metụtara ya ka ha bịa sonyere ya ụbọchị ahụ. Mana tupu a malite ime nke ahụ, obodo ga-ebugodi ụzọ richaa ji ọhụụ dịka obodo, maka na ọ bụ ọbagwò na-efé ọdụ, ọbụghị ọdụ na-efé ọbagwò. Otu ọ dị, ihe ndị a niile bụ ihe obi ụtọ na ihe oriri na ọñụñụ.
Na-agbanyeghị ihe ndị a niile, n'elu uwa ugbua, ọtụtụ ndị mmadụ na-ahụtazị iri ji ọhụụ dịka ikpere arụsị, ebe ndị obodo ụfọdụ mechigoro ya kpamkpam n'ihi na ha na-ahụta ndị na-eme ya dịka ndị na-agọ mmụọ na ndị nọ n'ìsì.
Ọtụtụ ndị nne na nna adịghịzịkwa ekwe ka ụmụ ha sonye na mmemme iri ji ọhụụ n'obodo ha, maọbụ rie ihe ọbụla e siri ebe ahụ, n'ihi na ha na-ahụta ya dịka ihe a gọọrọ arụsị, ma ọ bụ ihe ndị ngọ mmụọ. Ha chezọrọ na nke ahụ so n'otu ụzọ pụtakarịchara ihe e si akwalite njirimara na omenala ndị Igbo, bụrụ oge ndị obodo ji anọkọ ọnụ dịka ụmụnne wee kpaa maka ọdịmma, udo na ọganihu nke obodo ha, tinyere ọtụtụ úrù ndị ọzọ ọ na-ewèta.
Ihe kacha egbu njirimara na omenala ndị Igbo bụ ịgbakụta ha azụ site n'aka ụfọdụ ụmụafọ Igbo bụ ndị na-eche na ha hụrụ ụzọ, jekarịa poopu n'ụka maọbụ na ha na-ahụzị Chineke anya kwa ụbọchị. N'ebe ndị dị etu a nọ, ihe niile gbasaara ọdịnala na omenala Igbo bụzị ihe ọchịchịrị, ihe nzuzu na ihe ndị ọgọ mmụọ. Nke ahụ wee bụrụnnọọ echiche onye nzuzu sị na ya dara n'elu, na a mụghị ya amụ. Ụkpala na-ere ọkụ ọ sị na ọ na-aha mmanụ. Ihe ndị bụ nke anyị wee na-efunahịzị anyị maka na anyị bụ ndị nwere ogiri amaghịzị uru ogiri bara n'ofe, dịka ofeke amaghị uru àkpá agwụ bààrà ézè dibịa.
Ndị be anyị, ka anyị chigharịanụ ghọta na nke anyị bụ nke anyị bụ nke, na ọ bụkwa ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ka anyị kpọọ ihe anyị ihe. Ka anyị jisie ike n'ịkwalite na n'isonye n'omenala dị iche iche e jiri mara ndị Igbo maka na ọ na-abụ nkwụ daa n'ala, nwaanyị eñe ya uhie, rịa ya elu. A sị na ọ na-abụ onye kpọọ ọba ya ọkpọkọrọ, agbatobi ewere ya kpoo ahịha, ma sịkwa na ọ na-abụ onye sọnyụọ ọkụ ya, ọ nọrọ n'isi.
Onye ọbụla tinye aka ma gbasie mbọ ike otu o nwèrè ike n'ụdị nke ya iji ịkwàlite iri ji ọhụụ n'ala Igbo, ya na omenala, ọdịnala na ihe ndị ọzọ e jiri mara Igbo.
Ndị Igbo, ka anyị cheta na ọ bụkwanụ otu onye siri pịa akụ ya ka ọ ga-esi debe ọnụ; maka na, tigbuo mmụọ, tigbuo mmadụ, udele ka ga-ejupùtakwa n'eluigwe.